MAPS.ME အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
MAPS.ME – offline mapa viajar do brasil
12.3.2-Google for Android
ဒေါင်းလုပ် XAPK（104.5MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် MAPS.ME – offline mapa viajar do brasil
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွားသန်းပေါင်းသန်း 140 ကျော်နှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများ။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကားတစ်စီး, လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်နင်းခြင်း, လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်နင်းခြင်း, စိတ်0င်စားမှုအချက်များနှင့်အခြားမြေပုံများအတွက်ပျောက်ဆုံးနေသောအချက်များအတွက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အသေးစိတ်
Maps ကိုသန်းပေါင်းများစွာသော OpenStreetMap0န်ထမ်းများ။ OSM သည် Google Maps / GMAPS, TomTom နှင့် Garmin တို့အတွက် ops ည့်သည်အရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
SAO Paulo နှင့် Rio De Janeiro, Pernambuco နှင့် Minas Gerais, ရီယို Grande Do Sul နှင့် North နှင့် Bahia, Curitiba, Curitiba, Parana စသည်တို့ကိုစသည်တို့) ပဲရစ်, ပြင်သစ်? သုံ့ပန်း။ အမ်စတာဒမ်, ဟော်လန်? သုံ့ပန်း။ ဘာစီလိုနာ, စပိန်? သုံ့ပန်း။ နယူးယောက်, သုံ့ပန်း။ ရောမအီတလီလား သုံ့ပန်း။ လန်ဒန်, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း? ၎င်းသည် conferists ။
ကိုရှာဖွေခြင်း, စားသောက်ဆိုင်များ, ကဖေးများ, ခရီးသွားခြင်း, ခရီးသွား attractions ည့်သည်များ, application တွင်တိုက်ရိုက် Booking.com တွင် Booking.com မှတစ်ဆင့်ဟိုတယ်များတွင် - သင်၏တည်နေရာကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျသို့မဟုတ်လူမှုမီဒီယာများမှတဆင့်ဝေမျှပါ။ - pedaling သို့မဟုတ်လမ်းလျှောက်သည့်အခါလျှောက်လွှာသည်မငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသည်။ နောက်ခံရှိ GPS သည်ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသိသိသာသာလျော့နည်းစေနိုင်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အကူအညီစင်တာကိုကြည့်ပါ။ သင်၏မေးခွန်း၏အဖြေကိုသင်မတွေ့ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ [email protected] ။ fb: http://www.facebook.com/mapswithme | Twitter: @maps_me
ဘာအသစ်လဲ MAPS.ME – offline mapa viajar do brasil 12.3.2-Google
Maps.me tutorial How to use maps.me best offline map
Shynops Seaman's Life
Maps.me - mapaserotas offline, grátisebom para viajar!
How to Download Offline Maps in Google Maps - 2021
MAPS.ME: Descarga mapas gratuitos y sin necesidad de conexión
LOS MEJORES MAPAS OFFLINE PARA VIAJAR | vdeviajar.com
MAPS.ME: Offline maps GPS Nav 12.3.1-Google
Minn pyae Sone
sai koung loung sai